विदेश जानेको लर्काे | eAdarsha.com
विदेश जानेको लर्काे
१. यतिखेर पश्चिम नेपालका भन्सार नाकाहरुमा भारत तर्फ जान लागेका नेपालीहरुको ठूलै लर्काे देखिन्छ । त्यसमध्ये अधिकांश ३/४ महिना अघि भारतबाटै स्वदेश फर्केका हुन् । भारतमा कोरोना महामारी सुरुभएपछि कतिपय रोजगारी खोसिएर तथा कति ज्यान बचाउन कै लागि भनेर नेपाल फर्किएका थिए । मर्नै परे पनि आफ्नै देशमा गएर मर्ने भनेर उनीहरु हिडेका थिए ।
२. कति त फर्कन गाडी नपाएर पैदलै हिडेर पनि भोकभोकै कति दिन पछि देशका सिमानामा आईपुगे । सरकारले सबै नाका बन्द गरेको थियो । कतैबाट पनि पस्न नदिदा कति त अबैध बाटोबाट भित्र पसे । कति महाकाली नदीमा हेलिएर आए । देशमा पसेपछि पनि गाउँमा जान गाडी चढेकाहरु गाउँ नपुग्दै दुर्घटनामा परी कतिले ज्यान गुमाउन पुगे ।
३. सरकारले नाकाहरु बन्द गरेर आफ्ना नागरिकलाई रोक्यो । उनीहरुको स्थिति बेला थियो, कतिको खानेबस्ने खर्च थिएन । पछि चारै तर्फबाट दबाब आएपछि मात्र सरकारले छोड्यो । समयमै सरकारले नाकाहरुमा स्वास्थ्य जाँच र क्वारेन्टिनको व्यवस्था नगर्दा कोरोना संक्रमण फैलियो । यो सरकारको दोष थियो । तर दोष निरिह जनतामाथि लगाईयो ।
४. कोरोनाबाट ज्यान बचाउँन भनी गाउँ आएकाहरु सुरुमा त गाउँ आउन पाएकोमै रमाए । घरपरिवार र आफन्त भेटेर खुसी मनाए । खेतीपातीको वेला भएकोले त्यसमा लागे । हुनेले बाँझो फोरे । आएको एक डेढ महिनामै खल्ती रित्तियो । घरमा अन्नपात सकियो । गाउँमा रोजगारी भएन । रोगले भन्दा भोकले मरिने चिन्ता बढ्यो । फेरी उनीहरु रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भए र
५. देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएको कति भयो ? त्यसअघि विदेश पुगेकाहरुलाई लागेको थियो अब त देशमा विकास भईसक्यो होला । तर कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुंग्रोमा राखेपनि बाङ्गाको बाङ्गै भनेजस्तो उनीहरुले केही फेरिएको महशुस गर्न पाएनन् । जिविकाको लागि फेरी विदेशिनु पर्‍यो । नेपालीहरुले यो नियति कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने हो ? जिम्मेवार सरकार नभएसम्म यो समस्या रहिरहने भयो ।